July 4, 2021 - ApannPyay Media
July 4, 2021 by ApannPyay Media
ကျောက်ကပ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ ၁ – ဦးနှောက် အသည်းနှလုံးတို့ထက် ကျောက်ကပ်တွင်သွေးစီးဆင်းမူက ပိုမြင့်သည်။ ၂ – ကျောက်ကပ်သည်သွေး၏ ၉၉ % ကို ပြန်လည်စုပ်ယူသန့်စင်သုံးစွဲပြီး ၁% ကိုသာကျင်ငယ်ရည်အဖြစ် ပြန်လည် စွန့်ထုတ်သည်။ ၃ – ကျောက်ကပ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သော ကျောက် ( Stone )သည် ထုံးဓာတ်များသော ရေဆား , တို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ပေါင်းစပ်မူကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်စေသည်။ ၄ – ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်နင့် သကြားဓာတ်များသောအစားအစာများကလည်းကျောက်ကပ်ကျောက်တုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၅ – သကြားဓာတ်သည် အင်ဆူလင် ထုတ်လုပ်ရန် ဂလင်းရည်တစ်မျိုးထုတ်ပေးသည်။ယင်းက ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေပြီး ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်စေသည်။ ၆ – နွားနိုနင့် antacid အစာအိမ်အချဉ်ပေါက် ပျောက်ဆေးများအား အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းကလည်း ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်စေသည်။ … Read more
ရန်ကုန်မှာ​အောက်ဆီဂျင်အိုး ရနိုင်မယ့်​ ​နေရာများ
ရန်ကုန်မှာ​အောက်ဆီဂျင်အိုး ရနိုင်မယ့်​ ​နေရာများ မျှဝေဖော်ပြတာပါ။ ရန်ကုန်မှာ​အောက်ဆီဂျင်အိုး ရနိုင်မယ့်​ ​နေရာများ ဘုရားလမ်း လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် 09786012786 ပေးဆပ်ခြင်း ပရဟိတအသင်း ပုဇွန်​တောင်မြို့နယ် 09421139525 09263876640 09263876644 စေတနာ လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း အမှတ်(၃/၄)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်​တောင်မြို့နယ် 09254839779 09253381448 092500800100 09440470636 09793622114 095184798 ငြိမ်းချမ်းခြင်းလက်များ ပရဟိတအသင်း အ​နော်မာရပ်ကွက်၊ သာ​ကေတမြို့နယ် 09421004119 095077446 09420259094 နွယ်​အေး ဗလီ၊ ​ ဒေါပုံမြို့နယ် 09976544981 09250011562 095500787 ဖို့​မြေရပ်ကွက် လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း အမှတ်(၉၈/၁၀၀)၊ ၁၀၁လမ်း၊ မင်္ဂလာ​တောင်ညွန့်မြို့နယ် 01290782 095047868 0940044545 09443219152 သ​ပြေကုန်းရပ်ကွက် လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း အမှတ်(၃၅ ဘီ) ၁၂၅လမ်း၊ … Read more
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဝံအူမြစ် ( အံ့သြစရာ ဆေးစွမ်းထက်လို့ )
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဝံအူမြစ် ( အံ့သြစရာ ဆေးစွမ်းထက်လို့ ) (၁)ကျွန်တော်ကတော့ လက်ကျိုးတာဘယ်ဆေးခန်းမှလည်းမသွားပါဘူး။ ဝံအူအနီမြစ်နဲ့ပဲကျပ်စီးတါအခုတော့ ကောင်းပါပြီ။ စည်းတဲ့အချိန်နည်းနည်းပေါ့လိုက်လို့ဆက်တဲ့အချိန်အနိမ့်အမြင့်လေးတော့ဖြစ်တာပေါ့။ (၂ဝံအူမြစ်ကအရိုးကျိုးအရိုးအက်ပြန်ဆက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးချင့်ချိန်လိမ်းရစည်းရပါတယ်ပိုမိုပြောက်လိုဆောနဲ့လိုသည်ထက်ပိုမိုအသုံးပြုမိပါကအကြောသေတတ်တယ်သတိထားပြီးဆင်ဆင်ကျင်ကျင်အသုံး ပြုရပါမယ် (၃)လက်တွေ့ပျောက်တာပါ။ကနော်ကရွာကပါကောက်ရိုးလှည်းပေါ်က၂ပတ်၃ပတ်ဂျွန်းပြန်ကြပြီတော့လှည်းဘိန်းအောက်လက်ခင်းကျပြီးနင်းသွားတာကျိုးတယ်-တုတ်တယ်-ကွဲတယ်သုံးမျိုးလုံးဟာဝန်အူမြစ်ပြုတ်ရေနဲ့အမြစ်ပတ်တီးနဲ့ပဲလုံးဝအကောင်ဖြစ်သွားတာပါအကျန်းဘလမ်းလုံးဝခန်ပါတယ် တကယ်ဆေးစွမ်းကောင်းဆိုတာကျနော်လကါတွေ့ပါဗျအာမခန်ရဲတယ်။ ဖြစ်ချိန်ကတော့၁၄နှစ်ကပါအခုဆို၃၄ထဲရှိပါပြီဒီဆေးကိုဆေးဆရာကြီးများသိစေချင်ပါတယ် (၄)အရိုးကျိုးတာအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်သလို မန်းအားကြီးတဲ့ သူများအတွက် ဓါတ်ဗူး ထဲမှာရေနွေးစိမ်ပြီး လ်ဘက်ခြောက် နဲ့ ဖေါက်သောက်သလိုမျုိး အမြဲတမ်းစိမ်ပြီးသောက်ပေးနိုင်ရင် အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျား…… (၅)သွားကိုက်သွားနာလဲပျောက်ပါတယ်။အမြစ်ကိုဝါးပြီးကိုက်တဲ့သွားမှာဖိကပ်ထားတာ။ကျမအဖေသွားကိုက်ရင်သုံးနေကျပါ။ (၆)ဝံအူအားကိုး အရိုးကျိုး လို့အစဉ်အဆက် ပြောစကားရှိတယ်။ လက်တွေ့လဲသုံးလို့ အကျိုးရှိတာ အမှန်ပါ။ (၇)လေးဘက်နာထုံကျင်ခြင်းတွေလည်းအရမ်းကေါင်းပါတယ်ဝံအူမြစ်ကအဖြူးလည်း အနီလည်းကေါင်းနှစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ် (၈)ဝံအူကနှစ်မျိုးရှိသည်၊ဝံအူအဖြူနှင့်ဝံအူသွေးထွက်ပါ။ ဝံအူသွေးထွက်ကအပင်ကို ဓားနဲ့ခုတ်ရင်သွေးရောင်လိုရဲနေပါတယ်..လက်တွေ့ဗျို့..အရမ်းကောင်း.. (၉)တောင်ပေါ်ဒေသတော်တော်များများမှာအလေ့ကျပေါက်တာများပါတယ်အရွက်၃ရွက်ပါပြီးနွယ်ပင်အမျိုးစားပါ နွယ်နဲ့အမြစ်ကိုခုတ်လျှင်သွေးကဲ့သို့အနီရောင်အစေးတွေထွက်ပါတယ် (၁၀)လက်တွေ့လုပ်ဖူးပါတယ်၊ အခေါက်ကိုထုလိုက်ရင် အဖြူရောင်အစေးထွက်ပါတယ်၊အရိုးပြန်ဆက်တယ်။ (၁၁တကယ်လက်တွေ့ပါမြန်မာဆေးကမမှားပါဘူးအထက်ပိုင်မှာရှိပါတယ်လွန်ခဲတဲကျွန်တော်တိုတူလေလက်ကြိုးတာဝံအူမြစ်ကိုထုပြီပတ်တီးနဲစီးပေးလိုက်တော့ပြောက်သွားပြီတပတ်လောက်တော့လုပ်ပေးရတယ်ခုဆိုတူလေ၄တန်ရောက်ပြီမယုံမရှိပါနဲ (၁၂)ဝင်အူနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်အူနွယ်ကနှစ်မျိူးရှိပါတယ်၊ဝင်အူရိုးရိုးနဲ့သွေးထွက်ဝင်အူပါ။သွေးထွက်ဝင်အူကအနီရောင်အနီရောင်ကပိုထက်ပါတယ်။ (၁၃)အခေါက်ကိုခွာ နည်းနည်းပျော့အောင်ထု ပြီးအရိုးကျိုးလူနာများကျောက်ပတ်တီးစည်းသလိုစည်းပေ၁၅ရက်အတွင်းအရိုးဆက်တယ် (၁၄)ဟုတ်တယ်ဗျ၊နော်နော်တို့ဆီမှာပေါ့ပ။ … Read more
ကလေးဝဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထ လောက်အောင်မှန်နေတဲ့အနာဂါတ် မြန်မာပြည် ဟောစာတမ်းများ ကလေးဝ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထ လောက်အောင်မှန်နေတဲ့အနာဂါတ် မြန်မာပြည် ဟောစာတမ်းများ တိုင်းပြည်အနာဂါတ်အတွက် ဘောင်းဘီဝတ်တွေ လာလိမ့်မည် ဘုရားအဆူဆူမှာ စစ်ဖိနပ်သံတွေ ကြားရလိမ့်မည်။ရေစက်ခွက်ကိုင်လည်း ဘောင်းဘီဝတ်တွေပဲ..။(၂၀၀၀)နှစ်ထောင်ခုနှစ်မှစ၍…မြတ်ဘုရား၏သာသနာကိုသကြားကူလို့..စောင့်ရှောက်္မည် နဂါးတွေကို သာသနာကူဖို့..သကြားက တာဝန်ပေးလိုက်ပြီ..။ကပ်ဆေးလိမ့်မည်..။အမည်အသစ်နဲ့အနာရောဂါတွေ ပေါ်လာမယ်..။ ကူးစက်မြန်သည့်ကာလဝမ်း အနာမျိုးလိုပဲ..။ပိုးမွှားအနာပေါ့လေ..။ရေတွေကြီးမယ်..။မီးတွေလောင်မယ်..။မြေကမ္ဘာမှာမီးတောင်သေတွေ ပြန်ရှင်မယ်..။ အစုလိုက်အပုံလိုက် သေကျေပျက်စီးမယ် အခွန်ဘဏ္ဍာတွေ ကြက်အစာကောက်သလို..ဇလုတ်မောက်အောင်ကောက်လိမ့်မည်. ။ ချစ်တီးခေါင်း လယ်ထွန်မယ်..။များများချမ်းသာချင်သူတွေ…များများဒုက္ခရောက်္မယ် ဂုမ္ဘဏ် ဘီလူးတပ်တွေလူ့ပြည်ကိုဝင်စီးမယ် သဘာဝဘေးနဲ့အတူ စစ်ဘေးတွေ ပါလာလိမ့်မယ်..။တစ်ကျပ်မှာ တစ်မတ်ပဲ ကျန်မယ် အဖေကလည်း သားကို မကယ်နိုင် သားကလည်း အဖေကို မကယ်နိုင်..။ ခေတ်ဆိုးကာလဆိုးနဲ့ ကြုံလိမ့်မယ် ကပ်ကြီးသုံးပါး လာလိမ့်မယ် သရဏဂုံ တည်ကြ..။ ငါး ပါးသီလ … Read more
အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တဲမှိုကွန်ချာ အရိုးပွ အရိုးဆွေ အရိုးကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာ များကို ပုံပါ မှိုကွန်ချာ ဆေးရည်ကို လိမ်ပေးပါ အရိုးကင်ဆာ အရိုဆွေ အရိုပွ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်လို ကိုက်ခဲခြင်များကို ပုံပါမှိကွန်ချာ ဆေးရည်ကို တနေ ၃ ကြိမ်လျမ်ပေးပါ အကိုက်ခဲသက်သာပါတယ် လေဘက်နာ အမျိးမျိုး အဆစ် မြစ် ကိုက်ခဲခြင်ကင်ဆာကြိတ် အမျိးမျိုး ဖြစ်လဲလိမ်ပေးလိုရပါတယ် ဆေးဗူး လိုအပ်ပါ 09452036158 09 776218540 ကိုဖုန်ဆက်မှာယူဝယ်လိုရပါသည် အရိုးကင္ဆာ ေပ်ာက္တဲမိွုကြန္ခ်ာ အရိုးပြ အရိုးေဆြ အရိုးကင္ဆာ ရင္သားကင္ဆာ မ်ားကို ပံုပါ မိွုကြန္ခ်ာ ေဆးရည္ကို လိမ္ေပးပါ အရိုးကင္ဆာ အရိုေဆြ အရိုပြ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္လို ကိုက္ခဲျခင္မ်ားကို ပံုပါမိွကြန္ခ်ာ ေဆးရည္ကို … Read more
ပါရာစီတမောလ် သောက်ရင် သတိထားရမည့်အချက်လေးများ ပါရာစီတမောလ် သောက်ရင် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်များ ပါရာစီတမောလ်ကို အမြဲသောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိထားသင့်တာကတော့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပြီး မသောက်သုံးရဘူးဆိုတာပါပဲ။ သာမန်အားဖြင့် ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပါရာစီတမောလ်တစ်လုံးမှာ ၅ဝဝ မီလီဂရမ် ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်အတွက် အများဆုံး ပမာဏဟာ တစ်ခါသောက်လျှင် ၁ဝဝဝ မီလီဂရမ် (၂ – လုံး)ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံးအတွက် အများဆုံးသောက်သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ စုစုပေါင်း ၄၀၀၀ မီလီဂရမ် (၈လုံး) ဖြစ်ပါတယ်။ ပါရာစီတမောလ် လွန်ကဲစွာ သောက်သုံးမိပါက အသက်အန္တရာယ်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်နိုင်တတ်ပါတယ်။ ပါရာစီတမောလ် သောက်သုံးမှုများလေလေ အသည်းကိုထိခိုက်မှု များလေလေဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ တစ်နေ့ကို အရက်ပါဝင်တဲ့ ဘီယာ ၃ လုံးထက် ပိုသောက်နေပြီး အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ … Read more
အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ ဒီပုံလေးရိုက်ပြီးနောက်တော့… အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ဒီပုံလေးရိုက်ပြီး အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ဒီပုံလေးရိုက်ပြီးမကြာခင်မှာ အပြီးခွဲခွာရလိမ့်မယ်လို့ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးဘယ်သူကတွေးခဲ့မှာလဲ သားဖြစ်သူနဲ့ နောက်ဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတင်ရင်း နောက်ဆုံးအမှတ်တရပြောပြလာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူခင်မြတ်မွန် သားအမိ နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ (5.4.21)ညနေကားနဲ့ မြဝတီတက်တော့ အဝေးပြေးကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့ဖြစ်တယ် မေကြီးစိတ်မပူနဲ့ ကျနော်ကအပီအပြင် ရုပ်ဖျက်ထားတာ.ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့. မအေကတော့ခွဲရလို့လွမ်းတာရော.ဘေးရန်အတွက်စိတ်ပူတာရောသူကတော့အေး ဆေး ဘဲ.ပြုံးလို့.. idiots အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီးေနာက္ေတာ့… အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီး အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီးမၾကာခင္မွာ အၿပီးခြဲခြာရလိမ့္မယ္လို႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္လုံးဘယ္သူကေတြးခဲ့မွာလဲ သားျဖစ္သူနဲ႔ ေနာက္ဆုံးရိုက္ျဖစ္တဲ့ပုံေလးတင္ရင္း ေနာက္ဆုံးအမွတ္တရေျပာျပလာတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူခင္ျမတ္မြန္ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ေနာက္ဆုံးရိုက္ခဲ့တဲ့ပုံေလးပါ (5.4.21)ညေနကားနဲ႔ ျမဝတီတက္ေတာ့ အေဝးေျပးကားဂိတ္ကိုလိုက္ပို႔ျဖစ္တယ္ ေမႀကီးစိတ္မပူနဲ႔ က်ေနာ္ကအပီအျပင္ ႐ုပ္ဖ်က္ထားတာ.ဘာမွမျဖစ္ဘူးတဲ့. မေအကေတာ့ခြဲရလို႔လြမ္းတာေရာ.ေဘးရန္အတြက္စိတ္ပူတာေရာသူကေတာ့ေအး ေဆး ဘဲ.ျပဳံးလို႔.. idiots
အိမ်ရှင်မများအထူးသတိထားသင့်တဲ့ အန္တာရာယ်ရှိသော ကျောက်ငရုတ်ဆုံ (ကျောက်ကျည်ပွေ့)အကြောင်း
အိမ်ရှင်မများအထူးသတိထားသင့်တဲ့ အန္တာရာယ်ရှိသော ကျောက်ငရုတ်ဆုံ (ကျောက်ကျည်ပွေ့)အကြောင်း မြို့မြို့တောတော အိမ်တိုင်း၏ မီးဖိုချောင်တွင်မရှိ၍မဖြစ်သော ငရုတ်ဆုံများမှာ ရှိနေတတ် ကြလေသည် ငရုတ်သီး အထောင်းများ၍လည်း ငရုတ်ဆုံဟုတွင်ကျယ်စွာခေါ်ဝေါ် ကြခြင်းဖြစ်သည် ခရမ်းချည်သီးခရမ်ခရမ်းသီး တို့ကိုလည်းငရုတ်ဆုံတွင်ထည့်ထောင်း၍ ငရုတ်သီးနှင့်ရောဖျော်၍ စားသုံး ကြပါသည်ဆူးပုတ်ရွက်ထောင်း ဟူ၍လည်း စားသုံးကြပါသည် ကျောက်ငရုတ်ဆုံ ကျောက်ကျည်ပွေ့ သံကျည်ပွေ့ တို့သည်အန္တရာယ်များကြောင်းကို သိသူရှားပါးမည် ဟုထင်ပါသည် မည်သည့် ဟင်းလျှာ အစားစား ကိုဖြစ်စေ ကျောက်ငရုတ်ဆုံထဲတွင် ကျောက်ကျည်ပွေ့ သံကျည်ပွေ့များဖြင့် ထည့်၍မထောင်းရပေ ကျမ်းမာရေးအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များလေသည် ကျောက်ငရုတ်ဆုံကို ကျောက်ကျည်ပွေ့သံကျည်ပွေ့များဖြင့်ထောင်းသည်ဖြစ်၍ အထောင်းခံရသော ကျောက်ငရုတ်ဆုံမှကျောက်မှုန့်များ ထွက်လာပါသည် ထိုကျောက်မှုန်များသည် ဟင်လျှာ အသီးအရွက်ေထာင်းများနှင့်ရောသမသွားကာစားသုံးသူများ၏ဝမ်းဗိုက် အတွင်းဆီသို့ရောက်သွားပါတော့သည် *အစာအိမ်ရောဂါ အသေအခြာခံရမည်မှာမလွဲတော့ပေ*တဦးတယောက်တွင် သာမက မိသားစုအားလုံးပါ အစာအိမ်ဝေဒနာခံကို စားရမည်ဖြစ်ပါသည် အမှန် … Read more
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကျေးဇူးများလွန်းတဲ့အသီးလေးဖြစ်လို့ ရုံးပတေသီးကို မချစ်တောင်မှ မုန်းလို့ဆိုပြီးပစ်မထားသင့်ပါဘူး
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကျေးဇူးများလွန်းတဲ့အသီးလေးဖြစ်လို့ ရုံးပတေသီးကို မချစ်တောင်မှ မုန်းလို့ဆိုပြီးပစ်မထားသင့်ပါဘူး ၁.၆.၂၀၂၁.နေ့က စပြီးရုံးပတေသီး ရေနွေးဖျော သောက်တာအခုဆို တစ်လပြည့်သွားပါပြီ။ အကျိုးအာနိသင်ကတော့ ဒူးနာတယ် ခြေထောက်နာတယ် ကြာကြာမရပ်နိုင်ဘူး ကြာကြာလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူး ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး ထလည်းနာ ထိုင်လည်းနာ တကျွတ်ကျွတ် အော်နေရတဲ့ပါးစပ်က ရောင်ပြီးတောင် “နာတယ်”လို့မထွက်လာတော့ဘူး။ အသက်ငါးဆယ်ကျော်ရင်ရုံးပတေသီးကို မချစ်တောင်မှမုန်းလို့ဆိုပြီး ပစ်မထားသင့်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကျေးဇူးများလွန်းတဲ့အသီးလေးဖြစ်လို့ ပေါင်းထားသင့်ပါတယ်။ ပေါင်းနိုင်သလောက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိမ့်မယ်။ဒီအသီးလေးက အရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကို မောင်းထုတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိတာကတော့ အလွန်ကို အံ့သြသွားစေပါလိမ့်မယ်။ ရုံးပတေသီး သုံးတောင့်ကို ဓားနဲ့လှီးပြီး အဖုံးပါတဲ့ခွက်ထဲထည့် ရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပြီးအဖုံးပြန်အုပ်ထားပါ။ အေးသွားမှအရေလည်းသောက်အဖတ်လည်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကအစားအိမ်ထဲ အစာမရှိတဲ့အချိန်မှာစားရ သောက်ရမှာပါ။ တစ်ခါထဲ ကုန်အောင်မသောက်နိုင်ရင်နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်ထဲ အစာမရှိချိန်သောက်ဖို့က အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေးကိုတော့ မမေ့စေချင်ပါဘူး။ ဒူးနာ ခြေနာ အဆစ်မြစ်နာ ဝေဒနာ ရှင်များအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ … Read more